ဝဖေနျပွောဆိုသူတှကေို ပညာသားပါပါတုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ ဖှေးဖှေး – Askstyle
ဝဖေနျပွောဆိုသူတှကေို ပညာသားပါပါတုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ ဖှေးဖှေး
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ ဖွေးစိန်လေးကတော့ လက်ရှိမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ခံစားချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှလေ့ရှိတဲ့ ဖွေးစိန်လေးကတော့ စိတ်ထဲခံစားချက်တွေရှိနေတဲ့ပုံကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း ဖွေးစိန်လေးကို အားပေးစကားတွေပြောနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့ ဖွေးစိန်လေးကတော့ အခြားသူတွေကို ဝေဖန်မယ့်အစား သူ့ကိုယ်သူပြန်သုံးသပ်ဝေဖန်တဲ့အကြောင်းကို “ Not all but mostly Burmese people judge so easily upon others’ life..But did they even look at the mirror and judge themselves honestly yet??..Well i did . . . & that moment is so scary yet so free…Try it? ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ တစ်ဖက်သားအားဝေဖန်သူတွေကို ပညာသားပါပါတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ပိုစ့်အောက်မှာလည်း ဝေဖန်အပြစ်ပြောနေတဲ့ သူတွေကို ဂရုမစိုက်ဖို့ ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေက မှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွေးစိန်ကတော့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု (၃)ဆုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင် အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိထားသူဖြစ်ပေမယ့် ဟိတ်ဟန်မရှိဘဲ ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံတတ်သူ တစ်ဦးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ ကျရာဇာတ်ကောင်ကို ပီပြင်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူ စိတ်ရောလူရောအားထည့်ကာ အမြဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အနုပညာဝမ်းစာကို အပြည့်ဖြည့်တတ်သူပဲ ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်အပေါ် ဝါသနာကြီးသူတစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။သူမရဲ့ဖြူစင်တဲ့ စိတ်သဘောထားလေးကို ချစ်ရင် CeleConnections ပရိသတ်ကြီးလည်း မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော် ။
CeleConnections ပရိသတျကွီးရေ ဖှေးစိနျလေးကတော့ လကျရှိမှာလူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ သူမရဲ့ခံစားခကျြတှကေို ရငျဖှငျ့လာတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ခံစားခကျြတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ ခဈြတဲ့ပရိသတျတှကေို ဝမြှေလရှေိ့တဲ့ ဖှေးစိနျလေးကတော့ စိတျထဲခံစားခကျြတှရှေိနတေဲ့ပုံကွောငျ့ ပရိသတျတှကေလညျး ဖှေးစိနျလေးကို အားပေးစကားတှပွေောနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမွဲပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနတေတျတဲ့ ဖှေးစိနျလေးကတော့ အခွားသူတှကေို ဝဖေနျမယျ့အစား သူ့ကိုယျသူပွနျသုံးသပျဝဖေနျတဲ့အကွောငျးကို “ Not all but mostly Burmese people judge so easily upon others’ life..But did they even look at the mirror and judge themselves honestly yet??..Well i did . . . & that moment is so scary yet so free…Try it? ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ တဈဖကျသားအားဝဖေနျသူတှကေို ပညာသားပါပါတုံ့ပွနျလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ ပိုဈ့အောကျမှာလညျး ဝဖေနျအပွဈပွောနတေဲ့ သူတှကေို ဂရုမစိုကျဖို့ ခဈြတဲ့ပရိသတျတှကေ မှတျခကျြတှပေေးနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဖှေးစိနျကတော့ အကောငျးဆုံးအမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆု (၃)ဆုပိုငျရှငျဖွဈတဲ့အပွငျ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာ အောငျမွငျမှုမြားစှာကိုရရှိထားသူဖွဈပမေယျ့ ဟိတျဟနျမရှိဘဲ ပရိသတျတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖျောဖျောရှရှေေ ဆကျဆံတတျသူ တဈဦးဆိုလညျး မမှားပါဘူးနျော။ ကရြာဇာတျကောငျကို ပီပွငျအောငျ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှနေဲ့အတူ စိတျရောလူရောအားထညျ့ကာ အမွဲ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှနေဲ့အနုပညာဝမျးစာကို အပွညျ့ဖွညျ့တတျသူပဲ ဖွဈပွီး အနုပညာအလုပျအပျေါ ဝါသနာကွီးသူတဈယောကျလို့ဆိုရမှာပါ။သူမရဲ့ဖွူစငျတဲ့ စိတျသဘောထားလေးကို ခဈြရငျ CeleConnections ပရိသတျကွီးလညျး မှတျခကျြတဈခုခုပေးခဲ့ပါဦးနျော ။